Ngabe umusha ku-GNU / Linux? Lokhu yinto okufanele uyazi | Kusuka kuLinux
Ngabe umusha ku-GNU / Linux? Lokhu yinto okufanele uyazi
Uma ungumsebenzisi we Windows, OS X noma olunye uhlelo lokusebenza ngaphandle kwe- I-GNU / Linux, le ndatshana ingeyakho, ngoba ngokuthinta okufanayo ezinye yamaphuzu okumele anakwe lapho «uthuthela» usuka kolunye uhlelo uye kolunye.
Ngiqala ngokuthatha amazwana umsebenzisi asibize ngawo esikhathini esithile esidlule Morgana, kokunye kokuthunyelwe okuyimpikiswano kakhulu esake saba nakho KusukaLinux. UMorgana wathi:
… Into eyodwa icacile: I-Linux AKUWONA wonke umuntu, kufanele uyithole. Kudinga intshisekelo, ukubekezela, ukubekezela, ilukuluku nesifiso sokubeka eceleni ubuvila bengqondo. Sonke siyazazi ezinye izindlela zeLinux. Mane ukhethe eyodwa yazo, yeka ibhulukwe lakho, ukhokhe isabelo ebhendi esemsebenzini bese uzivumela unyathelwe, uhlolwe futhi usetshenziswe.
Inkululeko inenani futhi wonke umuntu ukhululekile ukunquma ukuthi uzimisele yini ukuyikhokha noma cha. Ngubani ongafuni, ukuqhubeka nokuphila ngethebhulethi nangeselula ngaphandle kwamalungelo okuphatha (laba bantu abaxhomeki) futhi bakhokhele ngamakha i-OS evimbelayo abayithandayo nge-laptop yabo. Ukulungisa amazambane nokuhlafuna kuyabiza futhi akukhokhelwa ngemali kuphela ...
Uma ufuna ungaqhubeka nokusebenzisa (nganoma yisiphi isizathu) uhlelo lwakho olusebenzayo lwamanje (iWindows, OS X), kepha khumbula ukuthi uma uzongena kulo mhlaba othakazelisayo, ungalindeli ukuthola into efanayo oyisebenzisile uku.
Kusho ukuthini lokhu? Lokho asinakulindela okulandelayo kusuka ku-GNU / Linux:
Okudumile .exe o .msi njengoba ubazi azikho. Ukwehluleka esinakho .deb, .rpm, .tar.xz futhi noma kwezinye izimo kungenzeka, imvamisa azifakiwe ngokuchofoza kabili kuzo.
Ungalindeli ukuthi i- .doc, .docx namanye amafomethi we I-Microsoft Office zikhonjiswa ngendlela efanayo ku- LibreOffice, I-OpenOffice o I-Calligra. Noma ungatatazeli, Ihhovisi laseKingsoft kunganciphisa inkinga kancane.
Njengoba sisehhovisi ezishintshayo, ungalindeli ukuthola ngokuzenzakalela imithombo Arial, ITahoma, I-Verdana, Amahlaya wamaSan, Izikali, Lucida ubukhulu nokunye onakho ku-Windows naku-OS X. Yebo, ungazifaka, kodwa azilethelwa.
Udinga ukusheshisa, I-GTA V, Umhlaba wezempi yempi nezinkulungwane zeminye imidlalo, yivalelise kubo ngaphandle kokuthi ngethemba lokuthi ungabalingisa usebenzisa Iwayini. Lokhu okungenhla kusebenza ne- I-PhotoShop, Umdwebo we-Corel, Ihhovisi le-MS, njll ...
Ungalindeli ukuthi amadivayisi wekhompiyutha wakamuva futhi makhulu, ikakhulukazi amakhadi wevidiyo we-ATI ngokwesibonelo, asebenze ngo-100%. Uma ufuna ukuba nokuthile okuphephile, cabanga ngakho Intel o I-NVidia.
Uma uyazi ukuthi kuyini I-NTFS y FAT32Ngakho-ke ngiyakutshela ukuthi akuyona into ozoyithola I-GNU / Linux, nakhu esinakho I-Ext2, I-Ext3, I-Ext4, I-ReiserFS Nabanye abanye.
Azikho i-tenemos I-Windows Explorersinayo I-Dolphin, Nautilus, IThunar, I-PCManFM, phakathi kwabanye, ngakho-ke kufanele ukhethe eyodwa yazo.
iTunes asinayo, kepha yebo, Amarok, Clementine, Rhythmbox, I-Banshee… futhi nokuningi.
Kepha ngaphezu kwazo zonke izinto: Ungalindeli ukuthi i-GNU / Linux ibe yiWindows ne-OS X.
Ungakufunda lokhu bese uzizwa kabi, udumele, noma ucasukile. Kepha asikwazi ukuthatha lolu lwazi kalula. Ngokuya nge-Hardware, isifiso, izidingo nolwazi, amaphuzu amaningi angaphambilini angaxazululwa ngandlela thile.
Futhi uma ngasizathu simbe kungenakwenzeka ukuyixazulula, sihlala sinokukhetha kwe- I-Double Booteo. Okusiletha ephuzwini elilandelayo.
1 Yikuphi ukwabiwa engikukhethayo?
2 Sala kahle ekuvilapheni kwengqondo
3 Ngizoqala kuphi?
Yikuphi ukwabiwa engikukhethayo?
Ukusatshalaliswa kwe- I-GNU / Linux azifani nezinguqulo 200o, XP, Vista, Isikhombisa y 8 de Windows. Ngamanye amagama, akuzona izinhlobo ezihlukile zoHlelo Lokusebenza olufanayo.
Kunalokho babezoba njengaye IWindows 8 Ekugcineni, I-Windows 8 Professional, I-Windows 8 Enterprise, njll. okusho ukuthi, awahlukile ama-Operating Systems, kepha kunalokho, yizinhlobonhlobo ezahlukahlukene.
Ngokuya ngezidingo zethu, singathola ukwabiwa okuvuselelwa kakhudlwana, okulula, nokuhle kakhulu, kepha empeleni, konke kusebenza ngokufanayo I-Kernel (noma ngabe kunguqulo ezahlukahlukene, enezici eziningi noma ezingaphansi).
Kepha ungakhathazeki lokhu kubonakala kuyinkimbinkimbi kepha akunjalo. Ngokuhamba kwesikhathi, futhi kuphela uma ungena kulo mhlaba, uzobona ukuthi ukuqonda kanjani konke futhi uthole ukuthi kulula kanjani ukukhetha ukuthi yikuphi ukwabiwa okufanela izidingo zakho.
Kunokwabiwa okunakekelwa nokuqondiswa yizinkampani, futhi kukhona okunye okunakekelwa nokuqondiswa nguMphakathi wakho. Akukho elingcono kunelinye ngokususelwa eqinisweni lokuthi sonke asicabangi ngokufanayo noma sinezidingo ezifanayo.
Isibonelo: Ubuntu Kuyaziwa emhlabeni wonke njenge "I-Linux esebenziseka kalula". Futhi kuseyiqiniso ngokwengxenye, kepha akusikho kuphela ukusatshalaliswa okubhekiswe kubasebenzisi abasha, noma abasebenzisi bokugcina. Leyo, I-GNU / Linux noma i-Linux akuyona nje Ubuntu.
Ubuntu iphethwe yinkampani ebizwa I-Canonical, futhi iningi lezinqumo lenziwa ngumuntu oyedwa: UMark Shuttleworth. Kusho ukuthini lokhu? Ukuthi uma uMalume uMark efuna ukuthi Ubuntu bube luhlaza okwesibhakabhaka, makube njalo, akunandaba ukuthi ufuna kube Bomvu.
Futhi-ke sithola ukusatshalaliswa komphakathi okuningi, ngokwesibonelo I-Tanglu, lapho abasebenzisi bayo banquma ukuthi yini efakiwe hhayi ngentando yeningi. Kepha kungenzeka ukuthi I-Tanglu ayinikezi lula noma ukusetshenziswa okufanayo kwe- Ubuntu.
Futhi kulapho izinhlobo zomsebenzisi zingena khona. Kunabantu abajabule kanjena, ukuthi Ubuntu ixazulula izinkinga zabo futhi abanandaba noma ngabe kuluhlaza okwesibhakabhaka noma kubomvu. Futhi-ke, kunabantu abacabanga okuhlukile.
Uyaliqonda iphuzu cha? Ngamunye ukhetha lokho akufunayo futhi yilokho kuphela.
Sala kahle ekuvilapheni kwengqondo
Uma kukhona okuzwile kulokhu engikushilo ngenhla futhi usacabanga ukuthi ungaba ngomunye umsebenzisi we I-GNU / Linux, lapho-ke kufanele uzilungiselele ukuze, noma ngabe ukwabiwa kanjani, kulula noma kuyinkimbinkimbi kangakanani, kufanele ulahle ubuvila bengqondo.
Ngakho-ke, kufanele uzilungiselele uku:
Ufunda njalo, funda lapha, funda lapho, kumaForamu, amaManuwali, amaTutorials, Izindaba.
Kufanele uqonde ukuthi ngeke kuhlale kulula ukuthola usizo kanti kukhona abazocabanga ukuthi uyisilima ngokubuza nje. Uma lokhu kwenzeka kuwe ungakhathazeki, buza ngaphandle kwamahloni, noma yini, ku Inkundla yethu.
Kufanele ucacelwe ukuthi okuthile kungenzeka kungasebenzi njengoba ulindele, noma ngeke kusebenze okokuqala. Yize ungamangala futhi uthole ukuthi kusebenza kangcono kunalokho obukulindele.
Al ukuphela, Ikhonsoli o shell Awukwazi ukuyesaba, ngeke ikulume noma ikudle, kunalokho, izokwenza impilo yakho ibe lula kakhulu.
Uma okuthile kungakusebenzeli, ungakucabangi lokho I-GNU / Linux Kubi, noma kungasebenzi, cabanga ukuthi umenzi we-Hardware oyisebenzisayo uncamela ukuthi ukhokhe imali kuye, nakuMicrosoft, ukuze ikusebenzele.
Njalo, okungenani i-99,9% yesikhathi, kunenye indlela.
Leyo, kufanele ulungele ukucabanga ngokuhlukile. Yebo njengoba kusho Apple (Cabanga ngokuhlukile), kodwa kwehluke ngempela. Leyo, Akuyona into onginika yona, yilokho engikukhethayo.
Uma ngemuva kokufunda konke lokhu (okungabandakanyi i-100% lezinto okufanele uzicabangele), unquma ukuthi ufuna ukwazi okuningi, ngoba akudingeki uye kude kakhulu, khona lapha KusukaLinux sinemininingwane eminingi ewusizo:
Aplicaciones (Okuningi mayelana nezicelo nokuthi zisebenza kanjani)
Ukusatshalaliswa (Funda ukuthi ziyini nokuthi zingaki)
Ungathanda ukuzama i-Linux? Umhlahlandlela wabantu abafuna ukwazi nabasanda kufika.
Ungathanda ukuzama i-Linux? Umhlahlandlela wabantu abafuna ukwazi nabasanda kufika. (2nd. Ingxenye)
Kepha kunokunye okuningi ... kufanele uphequlule izigaba zethu:
Ukubukeka nokwenza ngezifiso
Okokufundisa, okwenziwa ngesandla, Amathiphu, Kanjani
Akukhathalekile ukuthi usebenzisa iWindows, i-OS X, noma olunye uhlelo olusebenzayo lobunikazi. Okubalulekile ukuthi akuyona i-OS kuphela ekhona noma esebenzayo. Kukhona okungaphezu kwalokho okubizwa I-GNU / Linux, * I-BSD y * NIX.
Uma unesikhathi, ukubekezela kanye nesifiso sokufunda, kungaba kuhle ukuzibheka futhi uzibonele ukuthi uyakwazi yini ukukusebenzisa noma cha. Uma bengibuza, uzokwazi yini.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Kunconyiwe » Ngabe umusha ku-GNU / Linux? Lokhu yinto okufanele uyazi
Amazwana ayi-101, shiya okwakho
I-athikili enhle kakhulu yabantu abacabanga ngokwazi okwengeziwe ngaleli zwe elihlaba umxhwele nokuthi ngaphezu kwakho konke ALIKHOZI ISITOLO, ngoba umuntu ufunda usuku nosuku.
Sanibonani nekhasi elihle kakhulu, qhubekani
Ngiyabonga uSebastian ngokuma abeke amazwana.
Wonke lawo maphuzu owakhulumayo yizizathu zokuthi kungani iLinux ingaphumeleli futhi ingasoze yaphumelela kwideskithophu.
Inkinga ukuthi iLinux Taliban ayiyiboni.
Uma uqaphela, inhloso yami ngale ndatshana akukhona ukuthola ukuphawula okunje, okungaphezu kokunikeza umbono ovumelekile, kusebenza kuphela ukwakha impi efanayo yakudala.
Kodwa-ke, ngiyakutshela ukuthi lawa maphuzu akuyona imbangela enkulu yokuthi iLinux ayiphumeleli kuDeskithophu (uma ihlose ukwenza kanjalo), kepha izikhathi eziningi nje ukushintsha indlela yokucabanga, kwabanye kuyabethusa kakhulu.
Usola u-Ismael ngokuthi ukuphawula kwakhe kusebenza kuphela "ukwakha impi efanayo njalonjalo", ngenkathi ngalesi sihloko ukhande ngamatshe zonke ezinye izinhlelo zokusebenza nabasebenzisi bazo ngokuphakamisa ifulegi lokuthi "uma ungasebenzisi i-Linux uyisiphukuphuku futhi ubola nge-Comic Sans, iTunes ne-NTFS ».
Ngaphandle kwalokho, kuyahlekisa uma uthi: «Anginaso isixazululo (wonke amagama owakhulumayo avela kuzinhlelo zokusebenza ezibusa kakhulu emakethe), kepha ku-Linux ngine-A, B, C ... (lapho wonke amagama usho ukuthi zivela kuzicelo zokuthi ngaphandle kwakho, mina nabanye ababili noma abathathu, akekho owaziyo) »
"Usale kahle ngobuvila bengqondo" ?? Ngubani owathi udokotela, umakhi wezakhiwo noma ummeli uphethwe ubuvila bengqondo ngokungasebenzisi i-Linux?
Mayelana nalezo zilangazelelo ezingalawulwa nezingangeneleli zeLinux zokunqoba kwideskithophu ... Iqiniso nje lokuthi lezi zinhlobo zemicabango zikhona ezenza zibambe iqhaza elikhulu kunoBill Gates uqobo, esiphika kakhulu futhi, ngaphandle kwalokho, ukusebenzisa ikhompyutha njengoba sazi namuhla, noma ngabe siyathanda noma cha, kuthwala igama lakhe.
Ngizizwa ngingumuntu ojabulayo, okwenza ukunqoba kwe-linux kudeskithophu YAMI nsuku zonke. Futhi yebo, ngezikhathi ezithile ngisebenzisa isoftware ephathelene nokuqhekeka, noma ngifaka i-Windows eboshelwe kubangani bami ngezinhlelo eziningi ezinezinombolo ze-serial eziphangiwe ezilandwe ku-inthanethi ... Abanikazi bazo bayayisikaza, uma bengayifuni emhlabeni ukuhlekisa ngayo njengabo, ukuthi benza isoftware engcono, ephephile noma, yini engikwaziyo, ukuthi bazinikele ekufuyeni izinkukhu, lapho amagama afana nokugenca, ukuqhekeka kanye nayo yonke iping ... labo don ayikho.
Uzakwethu, okokuqala, angimangaleli muntu, futhi uma ngikwenzile bekungeyona inhloso, njengoba wenza njengamanje ngamazwana akho, bese ngiyacaphuna:
... lapho wena nalesi sihloko ukhande ngamatshe zonke ezinye izinhlelo zokusebenza kanye nabasebenzisi bazo baphakamisa ifulegi lokuthi "uma ungasebenzisi i-Linux uyisiphukuphuku futhi ubola nge-Comic Sans, iTunes ne-NTFS" ...
Ungangitshela ukuthi ku-athikili yami ngihlasela kuphi olunye uhlelo lokusebenza? Ngoba kubonakala kimi ukuthi konke engikwenzile bekusho okukuWindows, ongeke ukuthole ku-GNU / Linux.
Uhumusha kabi amagama ami kusuka ku-PI kuya ku-PA. Lapho ngikhuluma ngokungavilaphi ngokwengqondo, ngithatha kalula ukuthi umsebenzisi unqume ukuqala emhlabeni we-GNU / Linux, ngakho konke lokho okubandakanya, futhi akakwazi ukuyeka lapho kubhekene nobunzima bokuqala obuvelayo.
Mayelana nalezo zilangazelelo ezingalawulwa nezingangeneleli zeLinux zokunqoba kwideskithophu ... Iqiniso nje lokuthi imicabango enjalo ikhona ibenza babe nobukhosi obukhulu kunoBill Gates uqobo, esimphika kakhulu futhi ngubani, ngaphandle kwalokhu, ukwandiswa kwekhompyutha njenge siyakwazi namuhla, noma ngabe siyathanda noma cha, sinegama lakhe.
Angikaze ngisho, futhi angikaze ngiqinisekise ukuthi i-GNU / Linux ifuna ukuphumelela kuDeskithophu .. Ngikusho kuyiphi ingxenye yokuthunyelwe? Ngoba ukuphela kwento engikushilo ngayo, futhi ngicaphuna, bekungukuthi:
Futhi njengoba ubona ngifaka amabakaki (uma uhlose ukukwenza). Akunandaba kimi, ngisebenzisa i-GNU / Linux futhi anginandaba ukuthi iyaphumelela noma cha. Ngiyayisebenzisa futhi iyangisebenzela.
Okokuqala nokucacisa cishe ngonyaka ongu-1 odlule nokuthile engikufunde kule bhulogi, ngiyakutshela ukuthi angikaze ngibe nesidingo sokuphawula, kodwa ngibona izimo….
Lapha inkinga enkulu ukuthi ama-90% ethu asebenzisa iLinux ayisebenzisela ukuzijabulisa, ilukuluku njll. Ngokwami ​​ngisebenzisa iWindows kancane futhi lapho nginesikhathi esincane ngiphambanisa nokufakwa kwami ​​kwe-arch, futhi ngijabule ngayo. Manje ngamunye usebenzisa uhlelo oluthile ngoba "luyamsebenzela" "kulula" "lwenza engikufunayo / engikudingayo" njll. Esimweni sami iWindows «Just Works» ngiyisebenzisela ukudlala, tooooooooall leyo midlalo emincane esefashinini eqhekeziwe namuhla ethekwini le-pirate (angisoze ngakhokhela umdlalo engizowusebenzisa ngo-10min futhi ngizokhathala, ngiqonde ukuthi imfucuza). Kepha uma ngifuna ukungena kwi-inthanethi noma ukwenza ezinye izinhlobo zezinto futhi ngidinga ukuzizwa ngiphephile, ngizwe ukuthi NGINOLAWULO lohlelo lwami, ngaleso sikhathi ngisebenzisa i-linux futhi uma ngigcwalisa ngokugcwele i-linux, angidingi enye isizathu sokuyisebenzisa, ngicabanga ukuthi ngisezingeni eliphakathi / eliphakeme le-linux kepha njengoba i-elav isho, kufanele ufunde, funa "ukubuyela" ezintweni, ungazivumeli uzuze okokuqala, kepha kusobala kuphela uma WINA kodwa ngomoya ophansi hamba usebenzise amafasitela akho futhi kuphele lapho, ukuphela kwenkinga.
Abaningi bathi "i-Linux ngeke iphumelele kudeskithophu uma ilandela le noma leya ndlela" manje ngithi, ngandlela thile ngabe iLinux izamile ukuphumelela kudeskithophu ngokususa Ubuntu ngokusobala? Angicabangi kanjalo…. Kuyimpumelelo kumaseva nakwideskithophu futhi kuyimpumelelo uma ubuncane besineke nokuziqhenya ngezinto ezenziwe kahle. Kepha lokho kuhlala kulowo nalowo uma ngabe abakufunayo yilokhu noma cha. Futhi kummeli, udokotela, umklami wezakhiwo ngiyangabaza kakhulu ukuthi uyakhathala kakhulu uma ngabe uhlelo lwefayela lakhe luyi-ntfs, ext4, angingabazi ukuthi unendaba nokuthile mayelana nohlelo olukhuluma ngokujule…. (Uxolo isipelingi, okwami ​​izinombolo, ukugqamisa akutholakali engqondweni yami XD) Salu2 Great Blog Boys qhubeka njalo. Ama-athikili "ombono" awasebenzeli kuphela ama-flamewars ngokunembile ukunikeza umbono womuntu siqu.
david belzec kusho
Phendula udavid belzec
Unephutha kubonakala kimi. Ukuthi i-GNU / Linux ayiphumeleli kwideskithophu kungenxa yokuthi isoftware yokuphathelene ne-freeware ayitholakali nge-GNU / Linux.
Iphakethe le-ADOBE alitholakali ku-Gnu / Linux ngokwesibonelo.
IMicrosoft ayisoze yathuthukisa iHhovisi leGnu / Linux.
Ngiyazi ukuthi akuwona umqondo wokuthi sonke silwa nawo wonke umuntu kepha ngifuna ukucacisa okuthile, ngisho neMicrosoft ingomunye wabahlanganyeli be-kernel, hhayi bona kuphela, i-Google, i-Samsung, i-Intel, i-IBM, phakathi kwabanye.
Ngakolunye uhlangothi, ngayeka ukusebenzisa amawindi lapho kuphuma iWindows7, ngaleso sikhathi ngangisebenzisa i-Photoshop kakhulu, kepha i-GIMP iyithuluzi elihle kakhulu, kangangoba ezigabeni ezithile ngiyibona ingcono kune-PS. iqiniso lokuthi iLinux ingumthombo ovulekile ayikwenzi kubi, njengoba kungeyona yonke into ezungeze iMicrosoft.
Abagcini nje ngokuba nabathuthukisi abahle futhi ngicabanga ukuthi umsebenzi wabanye kufanele ubaluleke ngendlela efanayo, ngokwengxenye ngaleso sizathu ngazikhuthaza ukuthi ngizame, ngoba njengomqambi ngangicabanga ukuthi kunabathuthukisi abahle kakhulu abasebenzela iLinux, lokho Kufanele futhi ngithokozele «ohlangothini olukhululekile lwemali.
Ukuthi awukholwa ukuthi iLinux iyakusebenzela, akusho ukuthi ayisebenzeli muntu, ngibheke, kusukela ngo-2008 ngisebenzisa iLinux, ngisho nomakhelwane bami bayayisebenzisa ngoba ngiyifakile futhi angiyizwa namanje khononda.
Nakulokhu futhi, ngiyaxolisa ngamazwana aphikisanayo, kepha bengicabanga ukuthi kunamaphuzu okufanele ngiwacacise.
Lezi zinhlelo zokusebenza i-PhotoShop, i-Corel Draw, i-MS Office enewayini isebenza kahle futhi konke kuyindaba ejwayelekile.Akekho umuntu owazalwa esebenzisa iWindows, iLinux ilula. Ngaphezu kwalokho, iLinux yenzelwe ukuthuthukiswa, ukuphatha kanye nokuhlelwa komsebenzi.
Yiluphi ulwazi oluhle kubantu abasha, kufanele futhi uthembeke ngoba abanye bakhuluma kuphela ngobuhle be-Tux kodwa hhayi ngeziphazamiso umsebenzisi omusha angaba nazo, kungaba nge-hardware noma isoftware abayisebenzisayo noma esebajwayele. Windows.
Futhi ngendlela, ku-Linux okungenani ikunikeza inzuzo yokuba nokuphathwa okuphelele kwezinhlelo zokusebenza ozifakile.
Futhi ngendlela, noma iyiphi i-POSIX OS iphakeme ngokuphelele kuneWindows.
Leyo yinto engiyibonile futhi lapho ngifuduka, ukuthi ngaqala ukuzizwa ukuthi ngingumnikazi wekhompyutha yami hhayi uhlelo lwami lokusebenza. Ngokuqondene nesitatimende sokugcina, ngiyavuma ngokuphelele, kuphela ukuthi iMicrosoft isebenzisa okuningi ekukhangiseni phakathi kwezinye izinto, futhi kukhona abasebenzisi abakholelwa ukuthi Ubuntu yi-linux (futhi okuphambene nalokho) kuphela i-canon xq echitha kakhulu ekukhangiseni
Ngokuyisisekelo, i-Ubuntu isibe ukusatshalaliswa okudume kakhulu kwe-GNU / Linux laphaya, ngoba ivumele iDebian ukuthi ithuthuke ezicini eziningi ezinjengokufaka okucacile nokuphathwa kwephakeji (ngisho iDebian inesikhungo sayo sesoftware njengoBuntu, kuphela kusekelwe kuma-repos okuzenzakalelayo we-Debian kanye / noma lawo ahlelwe kumthombo.list).
Ngenxa yomphakathi wakwaDebian nowobuntu, ngikwazile ukusiza abantu abambalwa abasebenzise Ubuntu.
Ukuqala nje ngokuklanywa kwezimvume kunoma yiluphi uhlelo * lwe-NIX futhi olwenza luphakeme kune-Windows.
Ngayo yonke inhlonipho efanele, ngabe ubungasebenzisi iWindows 8 ezinsukwini ezimbalwa ezedlule? Mina uqobo ngizama ukuthola i-100% yokusebenza kwe-distro ku-Raedon HD 6670 yami.
Yebo, bengisebenzisa iWindows 8 isonto elilodwa ngqo ngenxa yezizathu ezingasebenzi manje, kepha umuntu uhlangana ngani nenye? Ngibuyile ku-Arch + KDE 😀 yami
Elav othandekayo, inhloso yami bekungukuqinisekisa okushoyo ku-athikili yakho; ukuthi ukusebenzisa i-GNU / Linux akuyona into enhle, kepha kuwufanele umzamo. Okungenani engikuqondileyo. Okwamanje ngibhala ngivela emsebenzini ngeWindows 7 ... A hug mate.
Ngisebenzisa i-2-bit Windows Vista SP32 ne-7.4-bit Debian 32 (Wheezy). Kukodwa nje, induduzo itholakala ekwahlukaneni kwami ​​noDebian, lapho ingivumela khona ukuthi ngizulazule kuFirefox ngaphandle kwezinkinga ezivela kusixhumi esibonakalayo sedeskithophu (IFirefox yeWindows inzima kakhulu kumaWindows PC anezingxenyekazi zangaphakathi).
Ngalokho ebengikudinga ukuhlupheka ngeWindows, angikusebenzisele into eyodwa noma enye, ngoba ayingivumeli ukuthi ngihlele izinto eziningi ukuyenza isebenze (ngizamile ukukhanyisa iWindows Aero kuVista naku-7, kepha konke bekungasizi ngalutho ).
Noma kunjalo, ngisho ne-OSX inezinketho eziningi zokwenza ngokwezifiso kuneWindows.
Zijwayeze ngeManjaro, kuhle kakhulu. Ngenyanga edlule ngithenge i-HP entsha sha, ngazama ukufaka Ubuntu, Elementary, Suse, Fedora ngaphandle kwempumelelo, uManjaro wawa esibhakabhakeni ngenqubo elula yokufaka efaka uhlelo kanye nabashayeli uma ukhetha. KULULA, kuzinzile, kuyamangalisa.
Angicabangi ukuthi ngingaphila ngaphandle kwehlengethwa noma i-yakuake (ngicabanga ukuthi uma ngishintsha indawo engikuyo, bengizovumelana nezimo).
Umkami ushiye amafasitela e-ubuntu, ngoba nje ubekwazi ukuzulazula ngokukhulu ukushesha nangokushesha ... lokho nje futhi akafuni ukubuyela emuva. Futhi awudingi ukwazi i-terminal, noma yini, ngalokho onakho okuhlangabezana nezidingo zakho.
Iposi elihle kakhulu. Ngiyithandile ngoba inengqondo impela, inamaqiniso, ubuhle nobubi bayo (kuya ngokuthi ibukeka kanjani).
Ngiyabonga Cookie .. Damn, ngalesi sikhathi ngibona isiteketiso sakho ne-avatar futhi ngilambile i-xDD
Umnyama omnyama kusho
Iqiniso ukuthi ukuba i-athikili enhle kubonakala kimi ukuthi kukhubazekile. Futhi kuzolahleka ukubhala zonke izinto ezimbi onazo ezinhlelweni ezizimele futhi ongeke uzithole.
Isibonelo, ngeke uthole amagciwane, noma izikrini zokufa eziluhlaza okwesibhakabhaka. Ngeke ube nomnyango ongemuva kukhompyutha yakho lapho i-microsoft ishintsha isoftware yakho ngaphandle kokwazi kwakho futhi ngaphandle kwemvume yakho.
Ungashintsha ukubukeka nezingxenye zalo lonke uhlelo lokusebenza, uzoba nokuphepha okuningi, ukhohlwe ngokuhlukaniswa kwamadiski, njll., Njll.
Uma ngemuva kokufunda konke lokhu (engabandakanyi i-100% yezinto okufanele uzicabangele)Unquma ukuthi ufuna ukwazi okwengeziwe, ngoba awudingi ukuya kude kakhulu, khona lapha eLatinLinolwazi oluningi oluwusizo:
Inhloso yami bekungekona ukukhuluma ngezinzuzo ze-GNU / Linux, kepha ukusho ezinye zezinto abasebenzisi abaningi abeza befuna kwezinye izinhlelo zokusebenza futhi abangeke bazithole, okungenani ngendlela efanayo noma kalula. 😉
Sawubona Elav, yingakho nje ngikuthola ngikhubazekile. Ngoba ngicabanga ukuthi kusala ukusho ukuthi bafunani nokuthi bazotholani. Ngamanye amagama, olunye uhlangothi lwemali lushoda kancane, ngombono wami kunjalo.
Ngemuva kwakho konke, kungani singeke simemezele izinzuzo ze--u-Linux kulabo abeza nezinhlelo zokusebenza zokuphathelene?
Kungaba futhi indlela yokuthi, "kungahle kube nzima ukujwayela, futhi kuyadingeka ukwenza umzamo omncane nesifiso sokufunda izinto ezintsha. Kepha ngiyakholelwa, (futhi umfundi angakwazisa ngaleyo ndlela ), uma kufanelekile, ushintsho.
Noma kunjalo, ngiyakusho. hhayi njengokugxekwa kwendatshana, (engikuthandile ngakolunye uhlangothi), kepha njengegalelo ekuyithuthukiseni, leyo yinhloso yami ukuyisho.
Yebo, ngiyayiqonda i-U_U kepha ngicabanga ukuthi leyo ngxenye yesibili isivele ifakiwe kuzixhumanisi engizibekile 😀
lol, yebo kunjalo ayicacisiwe, kepha bengizoyithanda ukuthi icace kakhudlwana, lol.
Indatshana enhle kakhulu, imikhonzo.
Kepha, okuthunyelwe akukhulumi nge-Gnu / Linux nezinzuzo zayo uma kuqhathaniswa neWindows, kukhuluma ngesoftware yamahhala ngokujwayelekile. Ngaphezu kwalokho, noma ngabe isoftware "yinhle" noma "imbi" kuya ngokuthi ngubani oyiqophayo, akudingeki ukuthi iqondane ngqo nokuthi imahhala noma cha.
ah ngithole iposi elingalungile, ngiyaxolisa
I-Geek clown kusho
ikhonsoli manje isiyindaba nje yesalukazi ...
… Bengilokhu ngisebenzisa i-GNU / Linux cishe iminyaka eyi-12, futhi eminyakeni emi-4 edlule abasebenzisi abasha engihlangane nabo bebengenalo nofifi nge-console nangemiyalo.
Hhayi, angikho ezingeni lokulwa nabesifazane, kepha ngiyakutshela ukuthi usuhambe kakhulu ngalawo mazwana. Lokho kwabesifazane abakwi-software kuyinkinga ebucayi. Uma uhlelo belulokhu lukhona, futhi lusaqhubeka luyinto yomuntu wesilisa, kusobala ukuthi kunezincazelo zomphakathi nezamasiko ezingachaza lo mkhuba. Ngalawo mazwana kuyaqondakala ukuthi ubuchopho "besalukazi" abunakho ngohlelo, kepha lowo mqondo ufana nomhume kangangoba kubonakala kungakholeki ukuthi uvela emlonyeni womuntu othile ngekhulu lama-XNUMX. Ngenhlanhla, akuwona wonke umuntu ocabanga okufanayo ngabesifazane abaningi ngokwengeziwe abakhuthazwa ukuba balandele ukuqeqeshwa ngamakhompyutha.
Yini eyayilahlekile… .. ilangabi olimini olulungile kwezepolitiki.
umane nje ukuthi obabekazi, iningi labo alinandaba nalezi zinto nokunye okunye, njengoba ubona amadoda ambalwa afuna ukufunda izifundo ezihlobene nemfashini.
Ngokusobala omalumekazi abaningi abanasisekelo ngesizathu esifanayo sokuthi abanandaba nesayensi, izibalo, umqondo, futhi abanandaba nefa elide lamasiko okunzima ukuwephula, phakathi kwabanye ngoba abaningi bacabanga njengawe futhi babenze bazizwe kwabesifazane ababazungezile. Kokunye konke, ngicabanga ukuthi awukaze uqaphele ukuthi emhlabeni wezemfashini amadoda ayaphumelela, ngakho-ke angicabangi ukuthi imfashini yindaba ekhethekile yabesifazane abadala kuphela.
futhi uma ngikhuluma ngemiyalo, nginayo ethile ...
# ukumisa - isithombe –ikhishi
# yenza –me –a- isemishi
Uhlobo lukaJenny T kusho
Ngiyabonga Alma, okungenani imibono efana neyakho isiza ukuqinisekisa izindawo lapho singamukelekile khona. Yize lokho kokuchazela abesilisa ocansini izizathu zokwehluka kwenani labantu ezithakazelweni nasemisebenzini yabo, empeleni, kungokwenhlalo / namasiko kakhulu kunokuphilayo, kunjengoba isihloko sithi «kunzima kangakanani, khuluma nodonga, nciphisa ubuwula bakho, yakho [misogyny] '. Iningi nje alilingani.
Kepha ngiyabonga futhi, kuhle ukwazi ukuthi sizobutholaphi ubutha bokumane sigweme lezo zindawo futhi singafudumezi amakhanda ethu, kanti, awuthandi yini ukuthi imachirulo iziphikisa kanjani? I-LOL
Phendula kuJenny T-Type
sawubona: la mazwana afike eposini lami. Ngibe seLinux isikhashana (cishe izinyanga ezimbili) kepha ngithanda ukusho ukuthi abesifazane bebesenza konke kahle isikhathi eside, kepha ngicabanga ukuthi lolu hlobo lwesithangami ukusiza ukuthuthukisa uhlelo nabanye njengami (abasha) abafuna ukusebenzisa isoftware yamahhala. Ngifunde izinto eziningana futhi ngihlose ukuqhubeka ngoba ngiyithandile le distro (opensuse 13.2 kde) .Ngiyabonga
Kumele kube ngesokuqala salesi sitayela engisifundile futhi asenzi ukuqhathanisa okufana ne- "Linux imahhala, iWindows iyakhokhelwa" noma ithi "Isoftware ephethe izinhloli kuwe nakuLinux unayo ikhodi onayo."
Into eyodwa, izinhlelo ezahlukahlukene zeWindows kune-OS ehlukile yi-OS efanayo enezici ezisusiwe.
Ngokuqondile iGongui, njengokuhanjiswa okufana neKubuntu noma i-Chakra ngokwesibonelo, okungasebenzisa i-Desktop Environment efanayo, kepha kokunye kunezinhlelo zokusebenza ezingekho kokunye ngokuzenzakalela. Ngakho-ke ukufana nge-Windows Editions. Siyabonga ngokudlula lapha.
Lokhu uma kuyisiza esisiza umsebenzisi, umakhelwane ... akazitholi izindaba zokukhuthaza ukusetshenziswa!
PS: Suck le mandarin «Muylinux.com» !!
Ngivumelana ngokuphelele nokuphawula kukaMorgana. Kukanye kuphela lapho ngazama ukukholisa umngani ukuthi azame i-GNU Linux ngoba i-laptop yakhe yayisidilikile futhi into yokuqala ayisho ukuthi: kepha unayo i-hotmail? Futhi sengivele ngamtshela ukuthi, yehlisa, uyise kumuntu osebenza naye bese emfaka kuwe Windows.
Iningi labantu (okungenani labo abasemvelweni wami) basebenzisa ikhompyutha ukufunda ama-imeyili, ukubukela amavidiyo we-YouTube nokunye okunye futhi abakufunayo nje ukuthi lokho kusebenze, isikhathi. Abafuni noma abadingi ukufunda okunye.
Kuyiqiniso futhi ukuthi akudingeki ukuthi ube nesiphiwo sokusebenzisa i-GNU Linux. Ngibe nesipiliyoni seminyaka emibili ngeWindows futhi lapho ngishintshela ku-Ubuntu kubonakala kulula kakhulu kuneWindows. Futhi ngentshisekelo encane nokuhamba kancane emasontweni ambalwa bengivele ngiyiphatha kangcono kakhulu kuneWindows futhi okubaluleke kakhulu ukuthi benginomqondo omkhulu wokulawula yonke into kune-Windows.
I-athikili enhle kakhulu kepha angigculisekanga ngamanye amaphuzu, kuyefana nangenjwayelo, ukusola i-Gnu / Linux ngezinkinga ezingazazi futhi ezihlobene kakhulu nokusebenza kabi komkhakha.
Ingxenye yokuthunyelwe iyathakazelisa. Inhloso yinhle, kepha ngokubuka kokufundisa nokuhlonipha, kubonakala kimi ukuthi yehluleka ngokuphelele. Uhlu lwento iLinux engenayo (cishe kwasekuqaleni) ifana nesichasiso esithi: "Ngiyakuxwayisa futhi uma ungakuthandi kangcono, ungasondeli kithi." Ngicabanga ukuthi lelo iqhinga elihle yini lokuxhumanisa abantu abaningi nale ndawo enhle futhi impendulo yami ithi CHA. Mhlawumbe kungamagama, ithoni esetshenziswayo, kepha ngiyagcizelela, uma lokhu okuthunyelwe kuyisimemo sokwazi iLinux, ngingatshela ama-primipales ukuthi adlule; kulomhlaba omkhulu kunamaposi, izinkundla kanye neminye imithombo yolwazi enobungani futhi ecacile mayelana nokuthi kusho ukuthini ukushiya iWindows nokwenza ezinye izindlela.
Futhi kuthiwani ngalesi sihlokwana esithi "Sala kahle ekuvilapheni kwengqondo"? Bravo !!! Yeka ukuzivocavoca okuhle ekufundiseni nasekukhuthazeni. Ngenhlanhla, lawo maqhinga aphuma kudala ezikoleni zethu futhi angahle adingeke ezimeni ezinzima zokufundisa. Kokunye, le akuyona indlela ozama ngayo ukwenza abanye bathole umhlaba ongaziwa.
Kokunye, bengisebenzisa i-Linux iminyaka engu-6 futhi ngezikhathi ezithile kufanele ngibhekane nalesi sikhwama esiyiWindows. Kunezinto ezingenza ngithandane nomhlaba wonke we-GNU / Linux kanye nemigomo efakwa yilo phrojekthi, kepha eminyakeni edlule ngifunde noma yiziphi izimpendulo ezingasetshenziswanga "smug" ngisho "nezinganaki" lapho othile ebuza isilima umbuzo. Impela akukho okuxakayo ngakho, ngoba umsebenzisi weLinux ongumakadebona wenza kahle kakhulu njengososayensi wekhompyutha, hhayi umfundisi futhi ukhohlwa kalula ukuthi ukufunda kubiza ngaphezulu kunezinye, nokuthi ngisho noTorvalds noma uVan Rosum abazalwanga befundile.
Ukuphawula kwakho kuvumelekile, njengoba kusebenza futhi ukucacisa ukuthi angizange ngifunde izifundo zokufundisa, ngakho-ke kunzima kakhulu kimi ukukusebenzisa esikhathini esithile. Inhloso yami akukhona ukuhlehlisa isithombe noma ukusondeza (zoom), ukukhuluma iqiniso nje. 😉
Iqiniso lokuthi umuntu (ngokuvamile onamakhono wekhompyutha) kufanele afunde izinto eziningi ukusebenzisa uhlelo akusho ukuthi umuntu ojwayelekile (facebook, "guasap" kanye ne-CIA) kufanele afunde izinto eziningi. Kubonakala kimi ukuthi uqinisile ukubhala i-athikili enjalo kulesi siza ngoba imvamisa abantu "abasesha" banokuthanda amakhompyutha. Abanye bangamane babize i-TI. Vele, awunayo ithoni "yomakethi" ethe xaxa.
Akunjalo. Umuntu ongakhululekile angasebenzisa i-Linux ngokuphelele ngaphandle kokwazi lutho ngamakhompyutha. Ngiyazi ngoba ngiyabazi.
Ubaba wami uyisibonelo esihle salokho.
KULUNGILE. Ngicabanga ukuthi into enhle ukufunda ukugcwalisana njengomphakathi, akunjalo?
Ezinyangeni eziyi-6 ezedlule ngangena emhlabeni we-linux futhi ngakuthola kuthakazelisa, ngicabanga ukuthi ngumhlaba okufanele usetshenziselwe udaba oluphelele nolugcwele
Ukuphawula, okwenziwe ngumbhali wale ndatshana, kubonakala kimi kuyiqiniso impela futhi kulungile.
Ngizibheka njenge-newbie, emhlabeni we-GNU / Linux. Kusukela, ngiyisebenzise kuphela kusukela ngo-Agasti wonyaka odlule. Kodwa noma kunjalo, ngilokhu ngifunda izinto ezintsha nsuku zonke. Futhi ngithandeka kakhulu ngamathuba wokwenza ngokwezifiso. Futhi ngaphezu kwakho konke, ukuthi kufanele ufune impilo (i-google, izinkundla, ama-wikis ... njll) ukuxazulula izinkinga ezincane ongahlangabezana nazo, futhi ngaleyo ndlela ukwazi ukuqhubeka nokufunda usuku nosuku.
Ngikhumbula usuku engangiqala ukulayisha ngalo i-Linux ngoba ngangicasuke kakhulu yiWindows. Njalo lapho ngifometha i-pc, bekufanele ngifune izinhlelo nemibhalo engizokufaka kuma-DVD angaphezu kwama-50 (ukuhlukunyezwa), angikwazi ukuguqula noma yini ku-OS, i-pc yami ibitheleleka njalo, njll.
Kuyiqiniso ukuthi usuku lokuqala bekufanele ngisebenzise umugqa womyalo, bengithuka yonke indawo kepha ngokuzinikela, ukusesha kanye nezinzwa ezimbalwa engizilawulayo. I-Linux ishintsha usuku nosuku ibe ngcono. Angazi noma ngizobuyela kuWindows kepha angisoze ngashiya i-Linux.
Izinhlelo eziningi, imidlalo nokunye okungafakwa ngewayini.
I-World of Warcraft, isebenza ngesilinganiso se-platinum.
Imidlalo engama-80% nemibukiso ephume ngaphambi kowezi-2010
Imidlalo engama-90% nemibukiso ephume ngaphambi kuka-2005
Ezinye ezinye zinzima kakhulu ukufaka futhi kufanele wazi ukuthi ungayifunda kanjani imilayezo yamaphutha. Kepha cishe noma yini kungenzeka
Angazi, kepha ngenxa yeSteam yeLinux bengilokhu ngithola imidlalo eminingi (kungaba i-F2P noma ikhokhelwe), futhi iqiniso ukuthi ligijima kangcono kune-Windows.
Futhi, ngiyakuzonda ukusebenzisa iwayini ngoba imvamisa kuyikhanda elizama ukuqhuba uhlelo lweWindows olusebenza kahle nakwiGNU / Linux.
Ngisithandile impela lesi sihloko enginihalalisela ngaso
taku ndini kusho
Yeka isiqeshana sokuqala emhlabeni wezinkonkoni.
ngaphandle kokungabaza indlela engcono kakhulu yokwazisa noma ngubani futhi abavumele banqume ukuthi bazokhetha iphilisi eliluhlaza okwesibhakabhaka noma elibomvu.
Mhlawumbe i-terminal ayisoze yabekwa kuma-gui kodwa iyona ezuzisa kakhulu, noma kunjalo kuhlala kunezindawo ezisebenza kahle neziphendulayo njenge-GNOME.
Hahaha, manje uMorpheus ufika engqondweni .. Ngiyabonga
Okuthunyelwe okuhle kakhulu @elav, kuhle impela, kuhle ukuthi siyacaca, ngezinto ezinhle nezimbi zepenguin yethu ethandekayo.
Ngiyabonga F3niX 😉
UJose Fernando kusho
Ngiyithandile i-athikili yakho, futhi iqiniso liyiqiniso impela okushoyo, ngeshwa lomsebenzi wami kusamele ngisebenzise i-boot ebili, ngethemba ukuthi izinkampani zesoftware eziphathelene nazo zizobona ukuthi kunabasebenzisi abaningi be-Linux
Phendula uJose Fernando
Akukho okwenzekayo ukusebenzisa i-Dual Boot. Uma kufanele ukwenze, kufanele ukwenze 😀
ukubuyekeza okuhle, ikakhulukazi ukushiya ukwesaba ukushiya indawo yokunethezeka, funda okuthile okusha futhi uhlanganyele kokuhlangenwe nakho okusha ku-SO, ngisebenzisa i-Elementary OS Luna futhi ngiyaneliseka, kunconyiwe 😉
Ngiyajabula. I-ElementaryOS ukusatshalaliswa okuhle kakhulu 😀
Ngemuva cishe konyaka ngifunda izindatshana kule bhulogi, futhi sengivele ngineminyaka emithathu seLinux, namuhla ngo-1: 00 ngibhalisiwe ukusho okulandelayo:
I-athikili enhle kakhulu, imininingwane eyiqiniso impela yize abaningi bengayithandi, ngiyabonga.
Hlonipha ukuthi uyangenza. Ngibona kakhulu!!
Indatshana enhle kakhulu!
Hawu ukube ubaba ubonile lokhu. Bekusafanele ngimtshele ngokufana noma okuncane. Isihloko esihle kakhulu i-elav.
U-Aaron M. kusho
Mayelana ne-iTunes, kungangezwa ukuthi ngaphandle kwabadlali, njengensizakalo yokuthenga okuqukethwe kwe-multimedia, lapha kwi-GNU / Linux sinenketho yokusebenzisa i-Google Play.
Phendula u-Aaron M.
Indatshana enhle kakhulu.
Ngiyayithanda indlela ubuhle nobubi obuchazwa ngayo.
Ingqikithi ilungile impela ukuthi kwesinye isikhathi okudala ukwesaba okukhulu ukuguqulwa kwendlela yokucabanga; Kepha kumsebenzisi ojwayelekile (funda lowo osebenzisa i-FB, i-Youtube, i-imeyili) i-Linux ingaphezu kokuhle futhi ayidingi nokwazi ukuthi i-terminal ikhona ngokwesibonelo.
Uma ujwayela iLinux, kunzima ukusebenzisa i-Win $ kwamanye amakhompyutha.
Siyakuhalalisela u-Elav, i-athikili enhle kakhulu nesiza esihle kakhulu.
Njengoba ngihlala ngisho, inkinga ijwayeleke kakhulu kunanoma yini enye; Njengoba ezimweni eziningi amakhompyutha athengiswa kufakwe iWindows, abantu "bafunda" futhi bajwayele leyo OS, ngaphezu kokuthi izikole nezinye izikhungo zemfundo nazo zisebenzisa iWindows, okudala inqwaba yabasebenzisi abathunjiweyo; Kodwa-ke, uma kunalokho, kusukela ekuqaleni futhi ikakhulukazi ezikoleni, kusetshenziswa i-GNU / Linux, abantu "bebezoyijwayela" futhi kuzozwakala kuyinto engokwemvelo.
Ngaphandle kwalokho, i-athikili enhle kakhulu ...
Uma kuyiqiniso. Ngikholwa ngobuqotho ukuthi abantu abangabathandi bekhompyutha, abazi ukuthi i-OS iyini, ngakho-ke kusobala ukuthi abazi ezinye izinketho ngaphandle kweWindows.
Ngokwaziswa (nokukhangisa) okusizungezile nsuku zonke siyazi ukuthi: Imikhiqizo yakwa-Apple iza neMac OS OS yabo kanti abanye beza neWindows kwi-PC, ne-Android kumathebulethi.
Kungakho ngingabaza kakhulu ukuthi umuntu ongaphandle kwekhompyutha angaphendula umbuzo othi "Yini eku-PC yakho?" futhi izosibuza «Iyini i-OS?». UDintinto ukuthi uma sibuza ukuthi "Iyini iWindows PC yakho?"
Ngibonga wonke umuntu ophawule! Ngithemba kuphela ukukhombisa lokho okuvele kube yisithiyo kubasebenzisi abasha kwesinye isikhathi.
UJean Carlos kusho
Yeka ukungena okuhle, ngoba empeleni ngenkathi ngenza ushintsho ku-GNU / Linux bengicabanga ukuthi kuzofana neWindows nokuthi konke kuzongilungela.
Phendula uJean Carlos
Imininingwane nje, ayikho iWindows 8 Ultimate.
Hhayi cha? Hahaha .. bengicabanga kanjalo 😛
U-Elav, lokhu okuthunyelwe kuhle kakhulu. Ukukhombisa bonke abantu abahlela ukuqala uhambo oluya eLinux. Okuthunyelwe okungokoqobo futhi okungaxoliswanga. Hawu!
Ngiyabonga Lorenzo, ngiyajabula ukuthi uyithandile.
UDaniel De la Rosa kusho
Isikhumbuzo, sikhulu nje. Ngokudabukisayo bengifunda indaba yesithunzi [lambradelhelicopter.com] futhi yize iyindida futhi iqine ngandlela thile, kuyakhuthaza ukufunda le ndlela yokuqonda maqondana ne-linux, ukuzizwa sengathi abanye abantu abakhulu bazoyibiza. Ngiyabonga kusuka ku-linux, bangenze ngamamatheka 🙂
Phendula uDaniel De la Rosa
Ungathini, i-athikili enhle.
Ngenkathi ngiqala kulo mhlaba ngangisebenzisa iWindows XP, kepha ezinsukwini ezimbalwa ngakwazi ukujwayela Ubuntu futhi ngibe nentshisekelo ekufundeni ikhompyutha, ngenxa nje yelukuluku. Ngemuva kwalokho ngaya kuXubuntu, Debian + Xfce futhi manje ngizama ukuvulaSUSE KDE, yize kungeyona i-distro emnandi kwezinye izici (iyona enginike umsebenzi omkhulu).
Sihlala sizwa ukuthi "iWindows ingcono kuneLinux", ngakho-ke ngiqale ukuthatha le mbono njengeyiqiniso ngaphandle kokuphikisana. Kepha, yize kuyiqiniso ukuthi kuWindows kunezinto okulula ukuzenza, ngicabanga ukuthi inkinga enkulu kakhulu lapho okuthile kungasebenzi futhi ungazi ukuthi kungani. Ukuthola ikhambi akulula.
Ngijwayele kakhulu i-GNU / Linux cishe iminyaka engu-4 futhi ngivame ukusebenzisa iWindows 7 kweminye imidlalo ye-XD. Ngakho-ke njengoba "iWindows ingcono kuneLinux", ngicabanga ukuthi ngingenza izinto ezifanayo engizenza nsuku zonke nge-GNU / Linux yami, kepha-ke, ngaba nezinkinga ezithile:
1) Thwebula isikrini
Ku-GNU / Linux kwenziwa ngokucindezela ukhiye we-PrintPant bese iwindi lisinika izinketho zokuthi ungashutha kanjani nokuthi wenzeni ngesithombe.
Ku-Windows ... bengingazi ukuthi kanjani. Ngokusobala ngemuva kokucindezela i-PrintScreen, kuyadingeka ukuvula uhlelo lwe- «Paint» bese uhlela isithombe ukusuka lapho.
2) Hlukanisa imenenja yefayela windows ibe ngamathebhu (Thunar) noma phakathi (Nautilus, Dolphin).
3) Khweza izithombe ze-ISO.
4) Xhuma amanye amadivayisi. Ngokuvamile ukuzisebenzisa, kuyadingeka ukusebenzisa i-CD yokufaka eza nayo.
Ngiyakuqonda ukuthi ukushintsha usuke kwiWindows uye kwiGNU / Linux akulula, kepha futhi akuyona enye indlela ezungezile. Ku-GNU / Linux akudingeki neze ukufaka noma iyiphi isoftware ebhuthini yokuqala, ngoba sesivele sinakho konke: Ukuxhumeka kwe-inthanethi (ngisho nakwamanye amakhadi enethiwekhi ye-Wi-fi), isiphequluli sewebhu, i-office suite, ama-audio / video players, umhleli we izithombe, umphathi wefayela, i-pdf file reader, ne-etcetera ende.
Bengilokhu ngisebenzisa iMicrosoft Windows iminyaka, ake sithi ukuze kube lula noma endaweni lapho ngikhona, ukusetshenziswa kwayo kusakazeke kakhulu (iVenezuela), futhi ukusuka kuWindows kuya kuLinux kungu-360-degree change. kepha kunezinto ezithile mayelana namawindi ne-linux okufanele sizikhumbule. Isibonelo, ngubani okhumbula lokho okubizwa ngeMicrosoft Windows Millenium, ukwehluleka kweMicrosoft ngenkathi yemillennium entsha, iWindows 2000 noma izinguqulo ezahlukahlukene ezisemthethweni nezingekho emthethweni zeWindows xp. Eziningi zazo zaziphatha ikhanda kunoma ngubani ozisebenzisayo.
Yize ukusetshenziswa kweLinux kusanda kwenzeka eVenezuela, nsuku zonke kuheha abalandeli abaningi. Ngiyakhumbula ukuthi okokuqala ngisebenzisa iLinux, kwakunohlobo olungajwayelekile lweLinspire, okungajwayelekile, kepha ngiyalithanda izwe leLinux; ngibe sengisebenzisa Ubuntu no-Edubuntu ezinhlotsheni zabo 6.04 nangemva kwalokho (ngisenayo i-cd ebukhoma abayithumele mahhala), kepha lapho ngijabula kakhulu ngokusetshenziswa kwe-linux (futhi empeleni ngingaqinisekisa ukuthi isetshenziselwa nsuku zonke sebenzisa) ukuthi ube neselula ngokusatshalaliswa kwe-linux; iNokia N900 eneMaemo 5 njengohlelo lokusebenza. Ngiyavuma, akulula ukufaka uhlelo noma ukuxazulula inkinga yokusebenza kwe-linux, kufanele ufunde, uhlaziye, ufune imibono ehlukile futhi ubekezele kakhulu, kepha uthola ukwaneliseka ngokukubona kusebenza.
Njengamanje ngine-laptop ene-linux (ubuntu 12.04 lts) namawindi (windows 7), ngaphezu kwe-N900 futhi ngiyisebenzisa kaningi futhi ngingakutshela okuthile, akulula, kepha akunakwenzeka; kepha ukwaneliseka kokuyisebenzisa kukhulu kunokusebenzisa enye i-OS
Ngombono wami othobekile. Kuqoshwe yindatshana. Halala.
Ngabe umusha ku-GNU / Linux? Lokhu yinto okufanele uyazi »
GIJIMA UKUQHUBA, QHUBA !!!
Uma ungeke uyisebenzise kuseva, ungakwenzi kube nzima impilo yakho ...
Uma ikunikeza isikhumba, thenga iMac - eyimfihlo kakhulu nenhloli, kepha lokho KUSEBENZA ngaphandle kokuba yonke i-odyssey yansuku zonke.
Uma usuvele usebenzisa iWindows, qhubeka naleyo crap, uma usuzokhokhela ilayisense elisha ungazama iLinux ...
KODWA UNGALOKOTHI, UNGALOKOTHI UCABANGE UKUTHI KUZOKWENZA IMPILO YAKHO IBE LULA !!!
UNGENZE IPHUTHA LAMI NGELINYE, I-LINUX ISHOGO !!!
ULuis Antonio SA kusho
hahhahah, wonke umuntu ukhuluma ngokubuka kwakhe
Phendula uLuis Antonio SA
Ngivumelana kakhulu nawe, kepha ulwazi lwami lwe-IT luphansi, nginenkinga yokuthola izixazululo zezinkinga zami, futhi ngijabule ngeDebian yami, kepha ngisebenzisa okuncane kakhulu kuyo, noma inginika insizakalo Ngifuna.
Ngicacise, uma zinomusa, uma i-linux, impela, iphephile? Ngoba ngifunde izindatshana ezinhle kakhulu: ukuthi uma uhlelo lwakho lwabasebenzisi namalungelo luvimbela uhlelo ukuthi lungathinteki, ukuthi uma i-malware (iTrojans, i-spyware ...) ingavamile kakhulu futhi kunabancanyana abancane abangenzi lutho, uma bebezonyonyoba Abanye babo bebengeke bakwazi ukuthelela lolu hlelo kahle noma bafeze inhloso yabo ngenxa yalokhu nalokhuya, ukuthi uma kukhona ukuba sengozini okuncane okulungiswa ngokuzenzakalela, kepha, ngakolunye uhlangothi, kwamanye ama-blog, anjenge "elladodelmal" (. com), njll, nakuMazwana avela kwezinye izindawo akhuluma ngokuxhashazwa, ukuhlaselwa, ukuthi ubuthakathaka abutholakali kangako futhi bulungiswe masinyane, ukuthi uma ukukhuphuka kwamalungelo, ukulawula okuphelele kohlelo, ukuthi uma i-nsa, ( futhi ekugcineni, ngigcina sengidumele..) ngubani oqamba amanga? Ngabe kuliqiniso noma kungumbono noma kunjani?
Futhi ekugcineni .. ingabe ukusatshalaliswa okunjenge-mint noma ubuntu kuphephe / kuqinile njenganoma ikuphi okunye? akuzona? Noma kufanele ubalungise, ulandele imihlahlandlela, ubalungiselele ukuphepha okukhulu? kungaba i-firewall noma unike amandla okuthile ... lokho, ngiyabonga. Ngiyazi nje ukuthi angazi lutho 🙂
Izithiyo elizibeka ku-gnu / linux akulona iphutha lazo ikakhulukazi, imboni engafuni ukwazi lutho ngesoftware yamahhala -ayenqena ukwehluleka ukulawula umsebenzisi-, iMicrosoft ishintsha ifomethi ye-.doc njalo kaningi engenakwenzeka ukuyisebenzisa ngaphandle kweHhovisi. Ngokukhishwa kwabashayeli bamakhadi wehluzo sisendaweni eyodwa, okubaluleke kakhulu akufanele kube nomehluko ekusebenzeni kwehluzo phakathi kwe-linux ne-win -it i-linux eningi isizakala ngoba ayisebenzisi i-antivirus-, kepha iqiniso ukuthi abashayeli abaphathelene Bashiya okuningi abangakufisa, ikakhulukazi kwi-AMD futhi ukusebenza kubi kakhulu ku-linux kunaku windows.
Ngiyabingelela elav, okuthunyelwe kwakho kubonakala kukuhle kimi, kunokuba kungethuse kungikhuthaza ukuthi ngifune ukuqhubeka nokuphenya kabanzi. Ngiqalisiwe kulo mhlaba we-GNU / Linux. futhi ngingathanda ukufunda okwengeziwe.
kuhle kakhulu lapho ngifunda lapho nginesithakazelo esikhulu ngangiyibhulogi enhle kakhulu yalabo abayithandayo uma lapha ngingaluthola lonke ulwazi engilifunayo kusuka ku-linux kuzoba imikhonzo emikhulu
Uhlelo oluphelele futhi olusebenziseka kalula lwe-linux luyiminti, lapha ungafunda kabanzi nge-linux mint http://aceleratusistema.blogspot.com/2014/11/prueba-linux-mint.html
Bengikade ngifuna ukusebenzisa i-linux isikhathi eside futhi kungidonsela ukunaka ngoba ngifunde futhi ngathola imininingwane eyakhayo ngalokhu kepha uma ngiyizama ngihlala nginezinkinga futhi kungithatha isikhathi eside ukuzixazulula ngakho-ke umuntu uyazibuza ukuthi ngiyazithatha yini inzuzo ye-linux noma ngizama ukuyenza isebenze. Kufanele ukuthi ibe yithuluzi lokusebenzisa nokusizakala futhi hhayi izinkinga eziningi okufanele zifunwe ukuxazululwa futhi ngeshwa yilokho okwehlele kimi, ngakho-ke kufanele ngiqhubeke ngenye indlela. Ngisenesifiso sokufunda ukuthi ngiyisebenzisa kanjani ngoba ngithanda ukuthola ukuphepha okwengeziwe, ubumfihlo obuningi nenkululeko yokwenza ngokwezifiso futhi ngikujabulele, okuyilokho okuzwakalayo, okufundwayo nokwethembisiwe ku-Linux. Ngiyabonga ngalesi sithangami ngoba anginaye umuntu onentshisekelo yokukhuluma futhi axoxe ngalezi zinkinga.
I-athikili enkulu, ephelele ngokuphelele, futhi ngaphezu kwakho konke ingenze ngacabanga ngakho konke engikufundile cishe iminyaka eyi-8 nge-GNU / Linux kukonke, ngiyabonga.
IBaldho 16 kusho
Ngikuthola kumangalisa futhi kuyiqiniso impela ukuthi siyethemba ukuthi ama-novice nokuthi kungani kungenjalo, abanolwazi banikele ngemibono yabo, imibono yabo, okuhlangenwe nakho kwabo, njll.
Phendula uBaldho 16
Bengilokhu ngisebenzisa windows iminyaka, ngine-ubuntu efakiwe ...
ngeshwa uma ngithi, manje uma ngigcina i-linux njengohlelo oluyinhloko, ilaptop yami ihlale iveza ukungasebenzi kahle, ukushisa okweqile, i-openoffice ivala ngaso sonke isikhathi lapho ngenza amadokhumenti amade ngamafomethi amaningi kakhulu, kwenzeka okufanayo nge-calc lapho usebenzisa «amafomula ahlukahlukene» ,…. Ngivula lawo mafayela afanayo ku-msoffice futhi asebenza ngaphandle kwenkinga…. Bengicabanga…. format bese ufaka ubuntu futhi ... inkinga iyaqhubeka, umqondo uthi, kuyafana futhi amafayela anenkinga ethile encane ....
Ngazenza futhi zisuka nje ngabhala konke futhi…. isimanga… .. iphutha liyaqhubeka….
Ikhompyutha yami ephathekayo ngaphandle kwalapho kushisa kakhulu ngaphezu kwe-80 °, inabashayeli bokuthengisa, njll.
Ngokufingqa ngibe nokuhlangenwe nakho okubi nge-Ubuntu, okuwukuphela kwe-distro esebenza nge-100 njengoba kufanele bonke basebenze ukusebenzisa inguqulo ekhokhelwayo ...
Kubi kakhulu ukuthi kunezinkinga eziningi ezenzeka kuwe, ekuqaleni ngabhekana neziningi, bekukhathaza kakhulu, kepha ngokuhamba kwesikhathi konke kuthuthukile, kufaka phakathi ukuxhaswa, ngisebenzisa Ubuntu, kodwa ekuqaleni ngazama cishe ama-distros angama-30 ahlukene , ngisho noFedora, okubi kakhulu kunalokho engikusebenzisile, bekuhlala kunginika izinkinga, kufanele ukhethe okunye, okufana neMint, okususelwe ku-Ubuntu noma ku-Debian uqobo, ungapheli amandla, inzuzo yalokhu ukufunda ukuxazulula lezo zinkinga , Angisasebenzisi iwindi, ngaphandle uma kunesidingo njengalapho kufanele ngilungise i-PC, kepha uqobo ngiyishiyile.
Inkampani yami isebenzisa iLinux kwideskithophu, namuhla iLinux kungenye into kudeskithophu
Iyatholakala i-KaOS 2014.03 ngomsebenzi omusha wobuciko
Ukuqoshwa Kwesikrini Esilula: Ukuqopha Ideskithophu Yakho kwiLinux Akukaze Kube Lula